Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge (2020) – MM Subtitles
Video Sources 9827 Views Report Error
Mortel Kombat လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ မသိတဲ့သူဆိုတာ တော်တော်လေးရှားပါတယ်။
အခုပြောပြပေးမယ့် Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge ဆိုတဲ့ကားလေးကတော့ အခု ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Action, Animation ကားကောင်းလေးတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mortal Kombat ကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်း အတိုက်အခိုက်အကြမ်းစားတွေနဲ့ သွေးသံတရဲရဲ မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စင်္ကြာဝဠာကြီးမှာ နတ်ဘုရားတွေက လောကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မကျူးကျော်နိုင်အောင် တိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲတစ်ခု စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲကတော့ မျိုးဆက်တစ်ခုမှာတစ်ခါစီ မတူညီတဲ့လောကအသီးသီးက ထူးချွန်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေ တိုက်ခိုက်ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲမှာ (၁၀) ကြိမ်တိတိနိုင်တာနဲ့ ရှိရှိသမျှလောကတွေကို ကိုယ်အုပ်ချုပ်ချင်သလို စိတ်ကြိုက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို (၁၀) ကြိမ်တောင်အနိုင်ရရမယ့် ပြိုင်ပွဲမှာ အပြင်လောကက ဧကရာဇ်ရှာအိုခန်းက (၉) ကြိမ်တိတိအနိုင်ရထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာလောကရဲ့ကံကြမ္မာကကော ဘယ်လိုတွေဖြစ်နိုင်မလဲ?
ပြိုင်ပွဲမှာကော ဘယ်လိုတွေပြိုင်ဆိုင်ကြပြီး ဘယ်လိုအားပြိုင်မှုတွေရှိမလဲ?
လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပြင်းပြမှုက ဘယ်လောက်တောင် စွမ်းအားကြီးမားသလဲ ဆိုတာတွေကို ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Translator…..: Mg Moe Lwin
TMDb Rating 8.5 375 votes
Download 480p MyanCloud 294 MB
Download 720p G Drive 479 MB
Download 720p Yandex 479 MB
Download 720p MyanCloud 479 MB
Download 1080p G Drive 904 MB
Download 1080p Yandex 904 MB
Download 1080p MyanCloud 904 MB